Iflethi okanye indlu ekwicomplex esembindini wedolophu - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex esembindini wedolophu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNikos
Indlu iye yahlaziywa ngokupheleleyo ngoJuni, ngo-2018! Ime kumbindi wesixeko saseAgios Nikolaos kwaye kufutshane ungafumana iibhari, iiresityu, iibhaka, iimarike ezinkulu kwaye ngokuqinisekileyo imarike esembindini wesixeko. Umgama ukusuka kwindawo ukuya elunxwemeni awukho ngaphezu kweemitha ezili-100! Yindlu yesitudiyo enebhedi enye elingana nokumkani kunye nesofa enebhedi enye. Zonke izixhobo zombane zintsha kraca kunye nobuchwephesha obuphezulu, obufana neTV entsha eyi-32'' FullHD smart, umoya opholileyo, i-oveni kunye nefriji!
Le yindlu yoku-1 yeStudio Apartment embindini wesixeko kwaye ilinde ukuba ujonge ubuhle besiqithi saseKrete! Isifudumezi-manzi selanga sisetyenziselwa ukusetyenziswa kwemihla ngemihla nangona kunjalo impompo yamanzi ashushu yasekhaya nayo ifakwe kwimeko yeemfuno zamanzi ashushu ezongezelelweyo. I-balcony-terrace esanda kufakwa iyafumaneka kubathengi bethu kumgangatho ongasentla, apho unokuphumla khona, ukutshisa ilanga, ukonwabela ikofu yakho kwaye ujabulele ilanga kunye nombono oqaqambileyo! Ngaphaya koko, ngaphandle kwendawo yokupaka kawonke-wonke yasimahla edla ngokufumaneka kufutshane neflethi, kukho iindawo zokupaka ezimbini ezingekude kuneemitha ezingama-50, ukuze uhlale ukhululekile kwaye kulula! Ukongeza kwimakethi esembindini ekufutshane, kukwakho ulwandle oluhle noludumileyo oluneendawo zokutyela ezininzi kunye neendawo zokutyela ezirhangqwe, ebizwa ngokuba yi "Kitroplateia" Ulwandle, ekungekude kuneemitha ezili-100 ukusuka kwigumbi lokuhlala.
I-HDTV ene-intambo yepremiyamu, I-Chromecast, I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.80 · Izimvo eziyi-96
Yindawo enobubele, enelanga kwaye ilungile kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Nikos
Abazali bam baya kuba noxanduva lokubonelela iindwendwe ngezitshixo eziyimfuneko zendlu, kodwa ndim ophetheyo ngokusebenza kwayo kunye nokusingatha. Ke, ndiza kufumaneka kwiselfowuni yam ngenombolo +30 6957504801 okanye kwinombolo yokugcina +30 6942243943 ngayo nayiphi na imiyalelo kunye nolwazi olunokufuneka.
Abazali bam baya kuba noxanduva lokubonelela iindwendwe ngezitshixo eziyimfuneko zendlu, kodwa ndim ophetheyo ngokusebenza kwayo kunye nokusingatha. Ke, ndiza kufumaneka kwiselfowu…
Inombolo yomthetho: 00000053078
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Agios Nikolaos